Butaan ama Boqortooyada Butaan waa wadan Dhul xiran oo ku yaalo koonfurta Aasiya Bhutan (/ buːtɑːn /; འབྲུག་ ཡུལ་ Druk Yul), si rasmi ah Boqortooyada Bhutan (འབྲུག་ རྒྱལ་ཁཁབ་ Druk Gyal Khap), waa waddan baddan oo ku yaal Koonfurta Aasiya. Waxay ku taallaa dhinaca waqooyiga bari ee waqooyiga, gobolka Sikkim ee Hindiya iyo dooxada Chumbi ee Tibet ee galbeedka, gobolka Arunachal Pradesh ee bariga Hindiya, iyo dalalka Assam iyo West Bengal ee koonfurta. Bhutan waa joqraafi ahaan Koonfurta Aasiya waana gobolka labaad ee ugu tirada badan gobolka ka dib Maldives. Thimphu waa caasimadeeda iyo magaalada ugu weyn, halka Phuntsholing waa xarunta dhaqaalaha.
Madax-bannaanida Bhutan waxay ku jirtey qarniyo badan, waligeedna weligeed laguma dhicin taariikhdeeda. Waxaa lagu soo bandhigay waddada Tibaaxda ee Waddada Tibet, Hindiya iyo Koonfur Bari ee Asia, gobolka Bhutanese waxay soo saareen aqoonsi qaran oo kala duwan oo ku salaysan Buddhism. Waxaa hoggaaminaya hoggaamiye ruuxi ah oo loo yaqaano "Zhabdrung Rinpoche", dhulku wuxuu ka kooban yahay fiefdoms badan oo lagu xukumo sida Buddhist fiqi ahaan. Ka dib dagaalkii sokeeye qarnigii 19aad, Golaha Wakiilku wuxuu dib u midoobey waddanka waxana uu xiriir la sameeyey Boqortooyada Ingiriiska. Bhutan waxay sii wadeen iskaashi istiraatiiji ah oo lala yeeshay Hindiya intii lagu jiray kor u kaca wada xaajoodka Shiinaha, waxaana xuduud la leh xuduudaha dalka China. Sannadkii 2008, waxay ka gudubtay Boqortooyadii buuxsantay Boqortooyada Dastuuriga ah waxayna qabatay doorashadii ugu horreysay ee Golaha Qaranka ee Bhutan. Golaha Qaranka ee Bhutan wuxuu ka mid yahay baarlamanka xorta ah ee dimoqraadiga Bhutanese.
Muuqaalka dalka waxaa uu ka bilaabmaa bannaanka hoose ee dhulka hoostiisa ee koonfurta ilaa buuraha sare ee waqooyiga ee waqooyiga, halkaas oo ay ku jirto dusha sare ee 7,000 mitir (23,000 ft). Buuraha ugu sarreeya ee magaalada Bhutan waa Gangkhar Puensum, taas oo sidoo kale ah musharax adag oo loogu talagalay buurta ugu sarraysa aduunka oo dhan. Waxaa sidoo kale jira duur joogta kala duwan oo ku yaal Bhutan.
Koonfurta Aasiya, Bhutan ayaa markii ugu horreysay ku jirta xorriyadda dhaqaalaha, fududaynta ganacsiga, iyo nabadda; labaad ee dakhliga qofkiiba; waana waddanka ugu musuqmaasuqa badan ilaa 2016. Si kastaba ha noqotee, Bhutan ayaa weli ah waddanka ugu horumarsan. Hydroelectricity waxay xisaabisaa saamiga ugu badan ee dhoofinta. Dawladdu waa dimuqraadiyad baarlamaani ah; Madaxa dawladda waa Boqorka Bhutan, oo loo yaqaan 'Dragon King'. Bhutan waxay xiriirka diblomaasiyadeed la leedahay 52 waddan iyo Midowga Yurub, laakiin xiriir toos ah kuma laha shan ka mid ah xubnaha joogtada ah ee Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay. Waa xubin ka mid ah Qaramada Midoobay, SAARC, BIMSTEC iyo dhaqdhaqaaqa aan ku haboonayn. Ciidammada Bhutan waxay ku sii jirayaan xiriir xooggan oo ciidamada militariga ah la leh ciidamada Hindiya.
Bhutan sidoo kale waa la xusuusin karaa hormarinta fikradda farxada guud ee qaranka.
Vista de Thimphu
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Butaan&oldid=219380"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 12 Oktoobar 2021, marka ee eheed 19:24.